ဖူးနုသစ်: ရောက်တတ်ရာရာ (၁)
(၁) နောက်တာလား Google
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်း တစ်ယောက်က ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ ရေးထားလို့ စမ်းကြည့်မိပါတယ်။
၁။ Google Map ကို သွားပါ။
၂။ Get Direction ဆိုတာကို နှိပ်ပါ။
၃။ A ရဲ့ ဘေးမှာ Taiwan လို့ ရိုက်ပါ။
၄။ B ရဲ့ဘေးမှာ China လို့ ရိုက်ပါ။
၅။ Get Direction ဆိုတဲ့ Button ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
၆။ နံပါတ်စဉ် ၂၄ ကို ဖတ်ကြည့်ပါ။
အောက်က ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း တွေ့ရပါတယ်။
(၂) သူရဲကောင်းနဲ့ ကြယ်
ဒီနှစ် စက်တင်ဘာလထဲမှာ စင်ကာပူမှာ လုပ်တဲ့ စာပေ ဟောပြောပွဲကို သွားတော့ စာရေးဆရာ မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း) က မာရီလှတော ဆိုတဲ့ အမည်မထင်မရှားတဲ့ သူရဲကောင်းမ တစ်ယောက် အကြောင်းကို ပြောပြပါတယ်။ အဲဒီလို ပြောရင်းနဲ့ သူက သူရဲကောင်းတွေ သေရင် ကောင်းကင်မှာ ကြယ်ပွင့်ကလေးတွေ ဖြစ်တယ် ဆိုပြီးတော့ တင်စားပြီး ပြောပါတယ်။
စာရေးဆရာကတော့ ရသမြောက်အောင် တင်စားပြီး ပြောတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် ခေါင်းထဲမှာ ရုတ်တရက် တွေးမိတာက ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူဦးရေက ၅ ဘီလီယံ ပဲ ရှိတယ်။ စကြာဝဠာ တစ်ခုလုံး မပြောသေးနဲ့ဦး။ ကျွန်တော်တို့ အခု လက်ရှိနေထိုင်တဲ့ နဂါးငွေ့တန်း ဂယ်လက်ဆီ မှာတင် ရှိတဲ့ကြယ်ပေါင်းက ဘီလီယံ ၁၀၀ ကျော် ရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ လူအားလုံး သူရဲကောင်း ဖြစ်ရင်တောင်မှ ကြယ်နဲ့ အချိုးအစားက မမျှဘူး ဖြစ်နေတယ် ဆိုပြီးတော့ပါ။ တခါတလေ တော့လည်း ပေါက်ကရ မတွေးဘဲ အနုပညာကို အနုပညာအတိုင်း ခံစားတာပဲ ကောင်းပါတယ်။
ဘန်ကောက်မှာ ဝီကီတွေ့ဆုံပွဲ သွားတော့ ကိုသင်ကာ ပြောပြတဲ့ ဟာသ တစ်ခုကို ပြန်ပြောပြချင် ပါတယ်။ မြန်မာစာမှာ ပါဌ်ဆင့်တွေ ရေးလို့ ပေါက်ကရ ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းပါ။ ကမ္ဘာကျော် အာဂျင်တီးနား ဘောလုံးသမား ဘာတစ်စ်တူတာ (Batistuta) ရဲ့ နာမည်ကို စာရေးတဲ့သူ တစ်ယောက်က ကွန့်ပြီး ဘာတစ္စ တူတာ လို့ ရေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ ဘာတစ္စ တူတာ ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ရုတ်တရက် တွေ့လိုက်တဲ့ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးက ဒီပါဠိ စာလုံးကို ငါမတွေ့ဖူးသေးဘူး ဆိုပြီး ကျမ်းဂန်တွေ လျှောက်လှန်ပြီး ရှာပါသတဲ့။ အဲဒီတော့ ပါဌ်ဆင့်ဆိုတာ ဆင့်တိုင်းလည်း မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ အတွေးစ ခေါင်းထဲမှာ ပေါ်လာ ပါတယ်။
(၄) ပြုံးချင်စရာ အဓမ္မမှု
စင်ကာပူ စထရိတ်တိုင်းမ် သတင်းစာထဲမှာ ပြုံးချင်စရာ အဓမ္မမှု တစ်ခု ကို ဖတ်ရပါတယ်။ ပြည်ကြီးက လာပြီး ဝရိန်ဆော်တဲ့ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ တရုတ်တစ်ယောက်က သူ့လိုပဲ ပြည်ကြီးက လာပြီး ရုံးဝန်ထမ်းလုပ်နေတဲ့ တရုတ်မ တစ်ယောက်ကို ဟိုင်းဝေး လမ်းမဘေးမှာ အဓမ္မကျင့်တဲ့ အကြောင်း ရေးထားတာပါ။ အဓမ္မကျင့်တာတော့ ရယ်စရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အမှုသွား အမှုလာက ပြုံးချင်စရာပါ။ အဓမ္မကျင့်တဲ့သူက ကိစ္စပြီးတော့ တရုတ်မကို 'နင်နဲ့ ငါနဲ့ သူငယ်ချင်း ဖြစ်ရအောင်' ဆိုပြီး ဖုန်းနံပါတ် ပေးပါတယ်တဲ့။ တရုတ်မက ငြင်းပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တရုတ်မရဲ့ ပျောက်သွားတဲ့ ဖုန်းကို သူပြန်ရှာပေးမယ်ဆိုပြီး အဲဒီတရုတ်က ကမ်းလှမ်းပါသတဲ့။ နောက်တစ်နေ့မှာတော့ တရုတ်မက ရဲကို ခေါ်ပြီး ပြန်လာတဲ့ အချိန် အဲဒီနေရာမှာ ဖုန်းလာရှာနေတဲ့ တရုတ်နဲ့ ပက်ပင်းတိုးလို့ ရဲက တစ်ခါတည်း ဖမ်းလိုက် ပါတယ်။ ဒီတရုတ် မြန်မာပြည်က ထုတ်တဲ့ အပြာစာအုပ်တွေများ ဖတ်သလား မသိဘူးလို့ ခေါင်းထဲမှာ ပေါက်တတ်ကရ တွေးမိပြန်ပါတယ်။
(၅) ဂန်းစတား ကိုင်တဲ့ဓား
စလုံးမှာ အခုတလော ဂန်းစတားတွေ သောင်းကျန်း နေကြပါတယ်။ ဟိုနေရာမှာ ဓားခုတ်မှု ဖြစ်လိုက် ဒီနေရာမှာ ဓားခုတ်မှု ဖြစ်လိုက်နဲ့ သတင်းထဲမှာ တွေ့တွေ့နေရပါတယ်။ သောင်းကျန်းနေတဲ့ ဂန်းစတားတွေကို စလုံးရဲက လိုက်ဖမ်းတာ အတော်များများ မိပါတယ်။ အဲဒီ သတင်းတွေကို ဖတ်ရင်း ဂန်းစတားတွေဆီက မိတဲ့ ဓားတွေ ဓာတ်ပုံနဲ့ ပြထားတာကို ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ထဲမှာ တွေ့ရပါတယ်။ စလုံးက ဂန်းစတားတွေ ကိုင်တဲ့ ဓားတွေ မြင်ရတော့ ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်မိ ပါတယ်။ သူတို့ ကိုင်တဲ့ဓားဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ သုံးနေကြ ဝက်သားခုတ်တဲ့ဓား ကြက်သွန်လှီးတဲ့ ဓားမျိုးတွေပါ။ ကရာတေး ကစားတဲ့ ကင်ဒိုဓားတောင် သွေးထားရင် ရောင်းခွင့်မရှိတဲ့ နိုင်ငံ ဆိုတော့လည်း ကြက်သွန်လှီးတဲ့ ဓားနဲ့ ရမ်းကားကြ တာပေါ့လေ ဆိုပြီး တွေးရင်း ပြုံးမိပါတယ်။
Posted by ZT at 12:13 AM
Labels: ပေါက်တတ်ကရ, ဟာသ, အတွေး
15 Nov 10, 01:58
kom: ၅ ကေတာ႕မရယ္ရဘူး ဟင္း.
15 Nov 10, 01:57
kom: ၿမန္မာစဘုပ္ေတြ မဖတ္ပါဘူး။ pawthu ဘဲဖတ္တယ္။
15 Nov 10, 01:56
kom: ကိုယ္႕ဘာသာဘဲေရးေတာ႕မယ္ တစ္ခါကေပါ႕သတင္းစာထဲမွာ လူငယ္အလုပ္သမားေလးတစ္ဦၚက ငါးဆယ္ေက်ာ္တစ္ေယာ္ကကုိလားမသိဘူးအဲသလုိပါတယ္။ ကုိယ္႕ွမွာစဥ္းစာၿပီးေကာင္ေလးကိုသနားလုိက္တာ မတန္လုိက္တာေအ.ငါမ်ားဆိုရင္ ေကာင္ေလးဘက္ကေတာ
15 Nov 10, 01:55
kom: ၄. ကေတာ႕သိတ္နားမလည္ဘူး
15 Nov 10, 01:54
kom: ၃း ဘုန္းႀကီးကလဲအေတာ္ေလ႕လာတာာဘဲ
15 Nov 10, 01:53
kom: ရုပ္ဂွင္ထဲမွာ ငိုရင ္လုိက္မငိုဘူး မ်က္နာက်က္ႀကီးေမာ႕ႀကည္႕ၿပီး သူတို႕အိုက္တင္လုပ္ေနတာပါေလ လုိ႕ေတြးလုိက္ရင္သက္သာတယ္။
kom: နစ္. မွန္တယ္။
15 Nov 10, 01:52
၁) ေဟမာ သီခ်င္း သတိရမိတယ္။
~~ ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာ ကန္အင္းလ်ားေလာက္သာ ~~
၂) ဆရာေမာင္စိန္ဝင္း ေျပာေနတုန္းက ဖ်တ္ခနဲ သတိလက္လြတ္ေတြးမိတာ တစ္ခု႐ွိတယ္။ ေတာင္ဆိတ္ေတြအေၾကာင္းေျပာတုန္းကပါ။ ေတာင္ဆိတ္ေတြရဲ႕ လုပ္ပံုကိုင္နည္းကို ဆရာ အေတာ္ အေသးစိတ္ေျပာသြားတယ္။
ပထမဆံုး ေတာင္ဆိတ္အုပ္စု ႏွစ္စု ကြဲသြားတယ္။ အဲဒါက အႀကီးနဲ႔ အငယ္ ခြဲတာ။
ေနာက္ အငယ္အုပ္စုထဲက ႏွစ္ေကာင္ဟာ အႀကီးဘက္ကို လာေပါင္းရတယ္။ အဲဒါက အေရအတြက္ကို ညႇိတာ။ ႏွစ္ဘက္အုပ္စု အေရအတြက္တူမွသာ တဝက္တိတိ လြတ္မွာကိုး။
အဲဒီမွာ ဖ်တ္ခနဲဆို ေပၚလာတဲ့ အေတြး႐ွိတယ္။ အစက ထည့္ေရးမလို႔ပဲ။ ခု မေရးေတာ့ဘူး။
၃) ကေတာ့ သိပ္မဆက္စပ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေခါင္းထဲေပၚလာတာေလး။
ေဆးေက်ာင္းမွာ part II ေျဖခါနီးတည စာက်က္ေနတုန္း တေယာက္က ေမးတယ္တဲ့။
ေဟ့ေကာင္ အိုအန္အီး အုန္း ဆုိတာ ဘာလဲကြ
၄) ကေတာ့ ဘာမွ ေရးစရာမ႐ွိပါဘူး။ အဲဒီ တရားခံတ႐ုတ္ ဖတ္ မဖတ္ေတာ့ မသိဘူး။ ဦးစံ႐ွားဦးေႏွာက္နဲ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ရရင္ အဲဒီ တ႐ုတ္မ်ား ဖတ္သလားလုိ႔ ေတြးလိုက္မိတဲ့သူကေတာ့ ဖတ္ပံုရတယ္။ :D J/K!!!
၅) လတ္တေလာ အိမ္မွာ ၾကက္သြန္တို႔ င႐ုတ္သီးတို႔ ထည့္ႀကိတ္တဲ့စက္ (blender အေသးစား) ကို chopper လို႔ သံုးေနမိတာ ဆိုေတာ့...
အဲဒီသတင္းမွာ chopper လို႔ ဖတ္ရေတာ့ ႐ုတ္တရက္ အဲဒီစက္ႀကီး မ လာတာပဲ မ်က္လံုးထဲ ျမင္ေနတယ္။
pawthu ေရးတာကို ဖူးႏုသစ္ အီးလိုေပပါင္းျပီး သတ္ပံုမွားေနတာ မွတ္လို႔ :hehe:
သူတုိ႔ကုိင္တဲ့ ဒါးကရုိးရုိး ၾကက္သြန္လွီးတဲ့ဒါးမဟုတ္ပါဘူး
တစ္ခ်ဳိ႔ကေတာ့ဟုတ္တယ္၊ ရဲျပတုိက္ထဲမွာ ရွိတဲ့
ဂုိဏ္းစတားမရွိပဲ ကက္ဆီႏုိ ရန္းလုိ႔မရဘူးေလ၊
ဂုိဏ္းစတားမရွိရင္ ေဂလန္းတုိ႔ ဘူဂစ္တုိ႔ ဘယ္စီေတာ့မလဲ၊
no1 က လမ္းညႊန္အတိုင္း သြားခ်င္ေနတာ မဟုတ္လား :D
စိတ္၀င္စားစရာေလးေတြခ်ည္းပဲ။ Google မွာ ရွာၾကည္႔ေတာ႔ အဟုတ္ပဲဗ်ာ။ ေရကူးသြားပါတဲ႔။ သူကလဲ ရုပ္တည္ၾကီးနဲ႔ ေနာက္တတ္သားေနာ႔။